ကြက်ပုံပြင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » ကြက်ပုံပြင်
Posted by Good Idea on Nov 30, 2010 in Short Story |5comments
အကြည်တော် ကြက်ဖက ကြက်မနောက်ကို အသည်းအသန်လိုက်သည်။
ဒါကိုမြင်သော အပျိုလေး အတွေး – သူတို့ရဲ့ချစ်ခြင်းကို ဟို ကားစုတ်က ၀င်ရှုပ်သွားတာပဲ။
အပျိုကြီးအတွေး – တွေ့လား၊ ကြက်မက ကြက်ဖကိုမကြိုက်လို့ သူ့ ကိုယ်သူ အဆုံးစီရင်သွားတာ။
လူပျိုကြီးအတွေး – ကြက်ဖ ပေမယ့် အတွေးကောင်းရှာတယ်။ ဟို စကားပုံအတိုင်းပေါ့။ တစ်ရက် ပျော်ချင်ရင် လမ်းပေါ်မှာရှာ၊ တစ် လပျော်ချင် မိန်းမယူ၊ တစ်နှစ်ပျော် ချင် မယားငယ်ထား၊ တစ် သက်လုံး ပျော်ချင် လူပျိုကြီးပဲလုပ်-တဲ့။ အင်း ..ကြက်ဖခမျာ တစ်သက်လုံး ပျော် ချင်လို့နဲ့ တူပါတယ်။င်္
အပျိုကြီးအတွေး – ရှေ့မ ကြည့် နောက်မကြည့်လိုက်တာကိုး။ သေတာတောင်နည်းသေး။
လူပျိုကြီးအတွေး – ဟီဟိ- ဟို ကြက်မတော့ ကြက်ဖမရှိရင် တစ် သက်လုံးနေရခက်ပြီ။င်္ ကြက်ဖက ကြက်မနောက်ကို အသည်းအသန်လိုက်သည်။
ကံဆိုးစွာပင် ပြေးနေသောနှစ် ကောင်လုံးကို ကားဖြတ်တိုက်သွား သည်။
အပျိုလေးအတွေး – အစက တည်းက ကြက်ဖမီအောင်လိုက်သင့် တယ်။
လူပျိုလေးအတွေး – အမှန်ဆို ကြက်မလေးက အရှိန်လျှော့သင့် တယ်။
ကြက်များခေါင်းထဲတွင် ထိုမျှ သာရှိသော်လည်း
လူတွေက မျိုးစုံ တွေး မျိုးစုံပြောနေကြလေသည်။
အကြည်တော်ရေးတာ ထင်တယ် ။ ဟိုတစ်လောကပဲဖတ်လိုက်ရတယ် ဘယ်မှာလည်းတော့ စဉ်းစားလို့မရတော့ဘူး။
ဗိုလ်မှုးကြီးအတွေး – ကြက်ဖက ကြက်မသေအောင် စနစ်တကျ မဟာဗျူဟာနဲ့ခင်းလုပ်သွားတာ။ တိုက်တဲ့ကားသမားလည်း ငါ့လာတိုက်ဖို့ကြံစည်လေ့ကျင့်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်။ အစည်းအဝေးခေါ်ပြီး ကာကွယ်တဲ့နည်းလမ်းရှာဦးမှ….
ပြည်ခိုင်ဖြိုးအတွေး – ကြက်မရဲ့ အသည်းအမြစ်နဲ့ ရင်အုပ်သား အထက်ကိုပေးပြီးပေါင်သားအိမ်သယ်မှ။ ခြေရိုး၂ချောင်းတော့ လမ်းထိပ်က စွမ်းအားရှင်ကိုပေးပြီး ကြက်ဖကိုပါ သတ်ခိုင်းလိုက်မယ်။ ပြိးရင် ဟိုကောင်သတ်တယ်ပြောလိုက်မယ်။
ဒီမိုကရက်အတွေး – ကြက်မကိုတိုက်သွားတဲ့ ကားဒရိုင်ဘာ ကြံ့ ဖွတ်ဖြစ်မှာပဲ။ ကြက်မကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် သဂြိုလ်ပေးမှ။ တောက်..သဂြိုလ်ခကလည်း အစိုးရသောက်သုံးမကျတာနဲ့ မတရားတောင်းမှာသေချာတယ်..။ ကြက်ဖကိုလည်း ဟိုကောင်တွေ သတ်စားဦးမယ်။ ငါကယ်တင်ဦးမှဖြစ်မှာပါ..။
ဘုန်းကြီးတပါးအတွေး – ကြက်တွေမှာ တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်လို့အသိညဏ်မရှိကြဘူး။ ကိလေသာမီးတွေလောင်မြိုက်ပြီး ဖြစ်နေကြတော့ အသက်ပါပါသွားတယ်။ ရှေ့ဘ၀က အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်မှာပဲ။ ၀ဋ်ပေါ့။ ကားဆရာလည်း နောင်ဘ၀ ၀ဋ်လည်တော့မှာပဲ။ သြော်.. ကားတွေရှိနေသ၍ သတ္တ၀ါတွေ သေကြဦးမှာပဲ..။ အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ
အပေါ်မှာ comment ပေးထားတာ အကြည်တော် တခြားလူတွေကိုယ်စား မတွေးဖြစ်တဲ့အတွေးကို တွေးပေးလိုက်တာပဲ။ ခေတ်နဲ့ညီလိုက်တာ။
ကောင်းလိုက်တဲ့ အတွေးအခေါ်စာစုလေးတွေ၊ တင်ပေးတဲ့လူရော၊ အပေါ်က comment ပေးတဲ့သူကိုပါ လေးစားပါတယ်ဗျာ….
တော်ပါပေတယ်။ အခုလိုတင်ပေးလို့ဖတ်ဖြစ်တာပါ။ ကြက်ဖနဲ့ကြက်မအတွေး တွေအဆင်ပြေကာနီးကျမှကားက၀င်ရှုတ်သွားတယ်။